I-Semalt Ithetha Ngee-Scrapers Zamahhala kunye neeNkqubo zoLondolozo lweDatha
Umxholo wewebhu kunye nedatha ingafumaneka ngeendlela ezininzi, kwaye indlela eqhelekileyo isebenzisa ii-API okanye ihamba ngephepha lewebhu ngokunika ikhowudi echanekileyo. Ukukhwa kwewebhu kusetyenziswa ngokubanzi ngabantu abaye baqala amashishini abo okanye baqala ukuqala. Ngenxa yolu qheliso, unokwenza uninzi lweziza ezinokwenzeka kwaye uququzelele idatha ngokwezidingo zakho. Apha sixoxe ngezona zinto zilungileyo ze-web scrapers kunye neenkqubo zokumbiwa kwedatha.
Ngelishwa, amajelo asekuhlaleni kunye nolwazi oluvulekileyo lwewebhu lukho kakhulu kwiifom ezingazalwanga - tractor appraiser. NgeComputyne, unokwenza lula ukuba unqande inani elikhulu leendawo kunye neefayile zokunxibelelana kwezentlalo. Inokukunceda ukugcina imifanekiso kwisixhobo sakho ngaphandle kwengxaki. I-Computyne inikeza iinkonzo zewebhu okanye ezichanekileyo ezinokukhawuleza, ezichanekileyo nezithembekileyo. Inokukunceda ukuba ulandele idatha esuka kwi-Wikipedia, i-TripAdvisor, iphepha eliphuzi, iphepha elimhlophe, iGoogle Maps, Yelp, kunye ne-Twitter.
2. I-Grepsr ye-Chrome:
Ngokungafani neninzi yezixhobo zokucoca zewebhu ezivuna idatha okanye ulwazi oluncedo, i-Grepsr iyakwazi cima idatha yakho ngaphandle kwemfuneko yamakhowudi.Umele udibanise kwisixhobo sayo sokugcina ifu kwaye uqale ukukhangela idatha oyifunayo. Grepsr ngokuyinhloko igcina idatha kwi-Google Drayivu, kodwa i-Dropbox, i-Amazon kunye ne-FTP iinkonzo ziyafumaneka. ukujonga ulwazi olutsha kunye nekhoyo ekhoyo ngexesha lakho lokumisela ukuze ungasebenzisi ixesha ekufumaneni ulwazi olufanelekileyo kwi-intanethi.
iTarantoola Inkqubo enamandla yokwehliswa kwewebhu eyaziwa ngokuba yinkqubo yokusebenzisana nayo yomsebenzisi. Sekudlulileyo iminyaka emininzi kwaye ikhulile inani elikhulu lezayithi kunye neeblogs. Inokukunceda ukunqumla isayithi lakho kunye nokukhipha idatha ehleliweyo kunye neyoyiyo yonke Umthombo we-intanethi.
iDataGuru inikezela ngokuchanekileyo, engenazo ingozi kunye nokuthengwa kwedatha i-vice, iinkonzo ze-website zokukhawulela, ukukhangela kwesikrini, kunye neenkonzo zokuhanjiswa ngetekisi. Ukuba yi-software ehamba phambili, i-iDataGuru yenza i-data yakho ngokukhawuleza kwaye iyakuthandwa ngabaqeqeshi bezempilo, iingcali ze-IT, ibhanki, abaphathi bezemali kunye nabaphuhlisi bewebhu.
I-BotScraper inamandla kwaye iyamangalisa i-web scraper kunye ne-data mining tool that digs deep in the internet kwaye ikufumanisa yonke into ekhoyo yedatha kuwe. Emva koko uguqula ulwazi olungenanto engenalo kwidatha efanelekileyo, ukunika umda kwi-intanethi yezoshishino. Inkqubo engabikho engozini engama-100 edibanisa nezinye iinkonzo ze-web scraping ukukunika iinkonzo ezenziwe ngokwezifiso, ukuza nokulindela kunye nokuzalisekisa iimfuno zakho zezoshishino. I-BotScraper yiprogram yokwenza i-ambitious scraping program eguqule i-intanethi ngemithwalo yeenkcukacha ezihlelwe kakuhle. Le software inokuphinda ikhuphe ii-imeyile yakho kwaye ifake iisayithi ezifakwe kwiikhowudi kunye ne-imeyile enekhowudi ngaphandle kokuphuma.